SHAYDAANKU MA JOOJIN KARO ERAYGA ILLAAH ,INUU QALBIYADA DADKA ADKEEYO AYAA LAGA YAABAA. – Akhbaarta Wanaagsan
SHAYDAANKU MA JOOJIN KARO ERAYGA ILLAAH ,INUU QALBIYADA DADKA ADKEEYO AYAA LAGA YAABAA.
Posted on August 26, 2016 October 12, 2016 by Raghe
Ciise wuxuu dadka u barayay dadka sida mid xukun iyo awood leh,waa run inuu awood iyo xukun lahaay waayo waa Illaah oo jir dad soo qaatay ,laakiinse dadka ayaa fahamsanayn.
CIISE WUXUU BILAABAY INUU WACDIYO OO UU CAAFIYO DADKA.
Ciise wuxuu tagay sangoogyada (meelaha yahuudu isugu yimaadaan si ay illaahooda u caabudaan) meesha layiraahdo kabaarnauum dad ayuuna wax baray (Markoos 1:21). Waxay la yaabeen wax baridiisii .hogaamiya yaalkoodu mar maalin walba oo Sabti ah sharcigii muuse ayay u akhrin jireen dadka,laakiin ciise wuxuu ka hadlay boqortooyada Illaah wuxuuna ku hadlaayay awood weyn.sidii nin xaq u leh inuu ayaga wax baro,(Markoos 1:22).
awood ayaa ku jirtay hadalkiisii.wuxuu yiri boqortooyada Illaah waa dhowdahay barakadeedana waad ku raaxaysan doontaan.shaydaanku ma burburin Karin erayga illaah laakiin wuxuu ka dhigay adayg in ciise dadka wax baro ama wacdiyaba.Ciise hadalkiisu dadka aad ayuu ugu awood badnaa ilaa uu nin ogaaday midka Ciise Almasiixi yahay,
Maxaad naga rabtaa anaga,Ciisihii reer naasareedoow !! ma waxaad u imaatay inaad na bur buriso? Kadibna ninkii wuu qayliyey ,waan garanayaa mid kaad tahay –waxad tahay midka quduuska ah ee illaah ( Markoos 1:24).
Ninkaas waxaa ku dhex jiray ruuxaan Jinniyo ,taasaana ka keentay inuu sidaan u hadlo .Ciise wuxuu ogaa waxa qaylinaya inaysan ninka ahayn,laakiin waxay ahayd ruuxaanta ku dhex jirta.markaasuu ciise yiri aamus oo kasoo bax! Ciise ayaa sidaas ruuxii xumaa u sheegay.Markaasaa jinnigii inta ninkii gilgilay kasoo baxay .
dadkiina way yaabeen.ruuxaanta ayuu amrayaa kadibna wey adeecayaan ayaa dadkii yiraahdeen (Markoos 1:27). Xasuuso in Ciise uusan u ogaalaan jinigu inuu hadlo waayo wey garanayeen qofkuu ahaa,(Markoos 1:25,34). Ciise shaydaanka uma ogolaan ,xukumaha jinniyada,inuu sheego qofkuu ahaa .
Ciise uma baahnayn in shaydaan u sheego dadka qofkuu asagu ahaa .waqti dheer kama soo wareegin markii dadku arkeen wax baridii ciise iyo markii ruuxaantu adeecday oo ay ka cabsatay(Markoos 1:27,28).qaar badan ayaa rumaystay midkuu asagu ahaa sababtoo ah mucjisooyinkii uu sameeyey,maxaa yeelay runta illaah kusaabsan ayuu baray isoo si awood leh ubaray.
Walaalayaal waxay tani noo caddeynaysaa in Ciise uu ka awood badnaa wadaada iyo weliba shaydaanka.
Rabbigu hanaga dhigo kuwii fahma midka uu Ciise Almasiixi yahay.Aamiin